WinToFlash [Bootable USB dala isiqulathi-zifayili] Imisebenzi isixhosa
Ngokukhawuleza, kulula kwaye bukhali.
Eyona Bootable USB isisombululo ungafumana
Inokuba kuza imini ukuba optical drives ingaba njengoko nzima ukufumana njengoko 5.25 floppy drives ingaba namhlanje. Amatsha-USB era ngu esiza!
WinToFlash kukuba sifuna ukwenza yenza umahluko omkhulu indlela ufuna umsebenzi. Kuya kwenza ubomi kakhulu kuba lula kuwe.
Ngokukhawuleza kwaye ngokulula uqhube inkqubo kuwe iimfuno kwaye akukho xesha kwaphela uzakufumana ngokwakho yokubhala essays kwi-Windows kwaye usebenzisa yakho bootable-USB. I-WinToFlash yenza umsebenzi hassle free kuba kuni.
Kanjalo, WinToFlash Lite ifumaneka simahla. Akukho kufuneka ahlawule ngawo onke kuba ekhaya kwaye hobby sebenzisa!
Faka Iifestile a bootable USB nakweliphi na isixhobo!
WinToFlash unako ukwenza bootable USB nayo nayiphi na bale mihla Windows Desktop kwaye Umncedisi usapho Ucwangciso. Nayiphi na iintlelo zingasetyenziswa - ukusuka Ekhaya Ultimate, 32 okanye i-64 bits.
WinToFlash kakhulu anamandla Windows Ukuya dala isiqulathi-zifayili evumela ukuba ufake kwaye iqhube ngokupheleleyo lwempahla ethengiswa Windows yokusebenza kwi-external bootable USB ngokukhawuleza okanye bootable hard drive. WinToFlash unako ukwenza Windows Ukuya bootable USB drive nakweliphi lwe-Windows/edition, nkqu ukususela officially ubunzulu.
Indlela malunga 5 kwezahlukeneyo Iiwindow iinguqulelo, live linux, kwi-intanethi antivirus kwaye imali Kuphila CD kwi-kanye bootable USB drive? Hayi ingxaki kwaphela! Ngoku uyakwazi ukwenza Multiboot bootable USB ne UNLIMITED inani bootable imiba kwindlela yakho USB drive. WinToFlash Multiboot ixhasa na Windows kwi-Windows Vista kwi-Windows 10.
Kunjalo, akukho ngakumbi omnyama-console iifestile awkward software ukuba ufuna non-esezantsi bootloader zifakelwe. WinToFlash unako yifake ngokuzenzekelayo, khetha nje GRUB4DOS kwi yokuqala loader iphepha, ukuba esezantsi uyoyisakala ukufaka ne-PC yakho.
ISO, ZIP, RAR, CAB, Ulawulo, i-CD okanye i-DVD
WinToFlash ifunda zonke ethandwa kakhulu isingxobo iifayili: imifanekiso kwaye zokugcina. Akukho mfuneko ntaba i drive okanye unpack kwabo ngesandla. Ukuba ufaka experimenting nge-Windows Ucwangciso kwaye wena musa ufuna pack yona ISO/ZIP lonke ixesha xa uvavanyo - nje misela imvelaphi iifayili zakho ulawulo kwaye cinezela qala.
UNKSZ-DOS kwi bootable USB
Abanye motherboards ifuna ubudala isimbo DOS flashing iinkqubo, WinToFlash kuzakwenza kuwe bootable USB nge-MS-DOS kwi mzuzu. Ikopi yakho flashing inkqubo yakho bootable-USB, & yiqalele kwaye ngokukhawuleza yakho BIOS.
Okanye ufuna nje ufuna ukudlala abanye okulungileyo DOS umdlalo kwi-real hardware?
FAT16, FAT32, NTFS, exFAT nge-CHS kwaye LBA addressing
Sebenzisa FAT16 CHS kwi-ehambele phambili, ukuba yakho motherboard lahluleka ukuyiqala apha phezulu USB drive kunye FAT32 Windows XP Ucwangciso. Kufuneka i-oyikhethileyo kuba ngcono ukungqinelana kwaye udubulo lwengxaki. Imiqathango tine bonke FAT iinketho ngu e yakho yenkonzo kakhulu! Misela na ubungakanani ulwahlulo ozifunayo.
Abanye motherboards uphumelele khange yokuqala kude kube usebenzisa CHS addressing kuba izahlulo kabini kwaye indlela yefayile. Ngoko ke, hayi, ingxaki, WinToFlash unako ukwenza oku!
Umthamo kwezixhobo zokusebenza
Ke nzima kakhulu namhlanje ukuthenga i-USB drive ngaphantsi kwe-4Gb kwi-store. Kodwa ukuba ufuna 512 Mb USB drive ukuyiqala ubudala DOS? WinToFlash uza umda wakho bootable USB na ubungakanani ozifunayo.
Sebenzisa olu khetho kwi-ehambele phambili, misela ixabiso kwaye cofa u-Qhuba!
Profiles ngaphandle kwaye ukufaka
Gcina yakho bootable USB iinketho ukuba ifayile kwaye ukufaka baphele nangaliphi na ixesha ozifunayo.
Iingxaki? Andinaku ukuqonda impazamo? Khangela ukuba ifayile yelog - impendulo ngu-phaya.
Epheleleyo uluhlu WinToFlash imisebenzi
Unyuso iwiki iphepha kwaye funda okungakumbi malunga WinToFlash imisebenzi